(DHAGEYSO) Amniga Garoowe oo laga wada hadlay. – Radio Daljir
(DHAGEYSO) Amniga Garoowe oo laga wada hadlay.
Maarso 24, 2016 4:58 b 0
Shir looga hadlayey Adkeynta amniga gobalka Nugaal, gaar ahaana caasumada dawladda Puntland ee Garoowe ayaa lagu qabtay magaalo madaxda, iyadoo ay ka qeybgaleen Taliska ciidamada Booliska Puntland & Kan gobalka Nugaal.
Taliyaha ciidamada Booliska ee Puntland Jeneraal Cabdirisaaq Maxamed Afguduud ayaa sheegay in looga baahan yahay dadweynuhu in ay qeyb ka noqdaan sidii wax looga qaban lahaa Amniga.
Jeneraalka ayaa codsadey in dadweynaha looga baahan yahay in ay si dhaw ula shaqeeyaan ciidamada Amniga, si looga hortago falalka amaan daro ee ay abaabuli karaan kooxaha lagu jabiyey dagaaladii u dambeeyey ee kadhacay Mudug & Nugaal.
Dhagayso MD Gaas: Midnimadeena ayaan ku gaarnay guusha maantay, dagaalkiina ma dhammaanin
Finland oo xukunkii ugu horeeyay oo la xiriira Argagaxiso ku Riday dad Somali ah